SomaliaReport: Masuul al-Shabaab: Soomaali-Swedishka La Dilay
Masuuul sare oo ka tirsan al-Shabaab isla markaana wata dhalashada dalka Sweden, Fu’aad Maxamed Qalaf (Shangole) ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay dagaalo gobolka Gedo ku dhex maray ciidamada dawladda ku meel gaadka ah iyo mlayshiyda al-Shabaab.
Duqa gobolka Gedo u qaabilsan dawladda, mudane Maxamed Khaliil ayaa u sheegay idaacadda ay UN-tu maalgaliso ee bar-kulan inuu Shongole ku jiray dadkii ku dintay dagaalo khadhaah oo ay al-Shabaab ku soo qaadday magaalada Garbaharay, kuna doonaysay inay kula wareegto magaalada oo ay dawladdu si nabad ha kula wareegtay sitimaankii la soo dhaafay.
Ilo-wareedyo gudaha ah ayaa u sheegay wargayska Somalia Report inay ugu yaraan 28 qof ay ku dhinteen magaalada ka dib markii ay dagaalyahanada al-Shabaab ku soo garaaceen magaalada madaafiic ay garab socdaan boqolaal ciidan oo dhulka ah kuwaasoo la dagaalamay ciidamada dawladda ku meel gaadhka ah oo ay is garabsanayaan urur-diimeedka qunyar socodka ah ee Ahlu Sunna salaaddii subax dabadeed.
Ilo-wareedyo ka ag dhaw xarakada al-Shabaab eek u sugan Baardheere, koonfurta Garbaharay, ayaa laga soo xigtay ayaa xaqiijiyey in mas’uuliin sare ay al-Shabaab kaga dhinteen dagaaladaas, waxaana ka mid ahaa madaxa wacyi-galinta shacabka u qaabilsanaa gobolka oo lagu magacaabi jiray Sheekh Maxamed Maxamuud. Abaandulaha Ahlu Sunna oo la hadlay wargayska Somalia Report ayaan isagu xaqiijin magacyada horjoogayaasha loaga dilay al-Shabaab, balse sheegay inay warbaahinta la wadaagi donaan talaadada magacyada iyo baasaboorada ilaa afar masuul o ay qarakood ajaanib yihiin.
Shangole ayaa isagu muddo 12 sano ah ku noolaa dalka Sweden oo uu magangalyo siyaasadeed ku joogay, wuxuuna ahaa imaam masaajid ka hor intuusan ku biirin ururkii maxaakiimta islamaiga. Markii ay ciidamada Itoobiya 2006dii meesha ka sareen maxaakiimtana wuxuu ku biiray dhaqdhqaaqa al-Shabaab sida ay sheegtay idaacadda Swedishku. Wuxuuna qayb ka ahaa dhagaxii lagu dilay gabadhii 13jirka ahayd iyo gacan goyn lagu sameeyey nin lagu soo rogay fal tuugnimo ah.
Ciidamada dawladda ee Garbaharay ayaa iyagu guulo ka sheegtay dagaaladaa, balse waxaa aad u kacsanaa habeenimadii isniinta xaaladda guud waxaana gudaha iyo dhinacyada magaalaada lagu arkayey ciidamada dawladda iyo kuwa ASWJ. Wararka ka imanaya magaalada Dooloow ayaa iyaguna sheegaya in ciidamo taakulayn ah oo isugu jira kuwa dawladda iyo kuwa ASWJ loo soo diray inay xoojiyaan ciidamada.
Dadka deegaanka magaalada Garbaharay ayaa iyagu filayey dagaalkan ilaa iyo sabtidii markaas oo ay ciidamada al-Shabaab bilaabeen inay dhufaysyo ka qotaan duleedka magaalada, meel ilaa 3 Km. u jirta magaalada.
Gobolka Gedo oo ah xuduudka isku xidha Kenya iyo Itoobiya ayey dawladdu guulo ka gaadheen halkas oo ay magaalooyin muhiim ah kala wareegeen ciidamada al-Shabaab oo hadda hawlgalladodu isu baddaleen weerao gaadmo ah, miino-aasid iyo hawlgalada loo yaqaan ku dhufo oo ka dhaqaaq.